AutoDesk ma bilaabi doontaa AutoGIS Max? - Gofumed
AutoDesk ma bilaabi doontaa AutoGIS Max?
Abriil, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, tabo cusub
Sida ay fikrado James Fee, halkaas oo ma blog caan ah, AutoDesk ku saabsan in uu ku dhawaaqo kale cusub ee codsiyada GIS waa, oo inkasta oo aanay muujin ay il, waxa ay u muuqataa in AutoDesk ugu dhakhsaha badan ku dhawaaqi doonaa ... laakiinse hubaal waa maalin caan kaftan ah " Maalinta nacas ee April ".
Sigaar cabista hadda, tani waxay naga dhigaysaa in aynu aragno dhowr arrimood, waxaa la go'aamiyay in AutoDesk ay u maleyneyso in ay ka baxdo ciyaarta sida marka la soo diro Land, oo doonaya in ay dilaan Noocidda Rayidka. Qaar ka mid ah waxay ku doodeen in qaabkii ugu dambeeyey ee 3D, ku dhawaad ​​dhammaan sifooyinka khariidada ee AutoCAD Khariidada ayaa la isku duubay wixii hore u jiray Softdesk iyo Mapka AutoCAD.
Waxaan sigaar cabbin soo jeedinta waa in AutoDesk qorshe si ay u abuuraan xirmo super koobaya dabeecadaha Geoengineering, oo ay ku jiraan Land Desktop, Map 3D, Civil 3D iyo MapGuide, oo dhan hoos deegaanka AutoCAD ku 2009 oo magaceeda ilaa waxa ugu baaqaysaa soo gaabiyey AutoGIS Max iyo adeega Smurf.
Marka ay dhamaato ee wadada, halgan u dhexeeya AutoDesk in ay helaan dhulka duurka ku geospatial waa halis, gaar ahaan hadda in dhufto ee horumarinta iyo Xooga kooxood ayaa u suurtagashay in ay koraan maalin kasta iyo qiimaha yihiin hoose, isha! ayaa sheegay in dhufto iyo qalabka, aan alaabta. Waxaa suurtagal ah in ESRI aysan lahayn ujeedooyin ku saabsan bii'ada injineernimada ama dhismaha, taas oo si fiican u heshay AutoDesk iyo Bentley, labada nadaam istiraatiiji ah oo kala duwan, laakiin sidoo kale soo gaaray ku dhawaad ​​saddex sano, ugu yaraan in deegaanka galbeedka.
Halkan waxaa ku qoran caddaynta ilaha qarsoodiga ah ee James Fee, oo loo turjumay version of our Hispanic digic:
Awood badan oo ay leedahay AutoDesk ayaa ku dhawaaqday furitaanka AutoCAD 2009 AutoGIS Max, qalab casri ah oo cusub oo GIS ah oo lagu dhisay bogga dagan ee AutoCAD 2009. AutoCAD 2009 AutoGIS Max wuxuu ku darayaa dhamaan sifooyinka macaamiisha ee AutoCAD Land and Map Map 3D, laakiin leh magac gaaban ... wanaagsan ama waxa ay noqon karaan.
Isticmaalayaashu ma aha oo kaliya inay helayaan sifooyinka hore ee Macaamiisha Macaamiisha / Meeelka XNSKD laakiin waxaan sidoo kale ku dhawaaqaynaa in AutoCAD 2009 AutoGIS Max wuxuu leeyahay tayada cusub ee "Deegaan badan oo isticmaala marka loo baahdo", loo yaqaan sida SMURFS Taasi waxay u oggolaanaysaa in ay si toos ah ula xidhiidhaan dadka isticmaala habka jawaab-celinta, ay fududeyneyso in qaababka GIS lagu daro sida loo fuliyo ... tobanka sano ee soo socda ... AutoDesk ayaa ku daraysa astaanta muraayadaha buluugga ah? (Smurf waxay noqon kartaa Smurf) si aad u barato dadka isticmaala qaababka GIS ee la heli karo.
AutoCAD 2009 AutoGIS Max waxa kale oo ay yeelan doontaa dhammaystirka barnaamijka AutoCAD 2009 AutoGIS MapGuide Xogta 2.0, oo ah hormuudka adeegyada khadka Internetka. Iyadoo lagu saleynayo MapGuide, oo la soo saaray iyada oo gacan ka heleysa bulshada ilkuha furan, kuwaas oo aan u kordhin karno saacado badan oo shaqo bilaash ah, Waxaan si daacadnimo ah uugu mahadcelineynaa dadaalkaaga. AutoCAD 2009 AutoGIS / MapGuide Webka 2.0 ayaa sidoo kale u oggolaan doonta sawirrada sawirada ku yaala bogagga ayadoo la marayo bey'adda 2.0
Mustaqbalka macaamiisha ee isdhexgalka mareegta webka waa halkan, kaalay oo ku raaxee.
Well, kaftan fiican James Fee, iyo sida uu sameeyey oo uu ku blog low-profile ku aadan helin dib u eegista badanu ay weli dhiman, u ogaato haddii aad ku dhicin inaad halkaas ku dhawaaqo iyo sidoo. Haddii waxa aan fahamsanahay, AutoCAD daal qabo qalab badan oo hadda doonaya in uu sameeyo-barnaamijka qaraniga ahee ee fashion "dhammaan waxaa ka mid ah, inaad qaadato ama ka baxdo, ama aad qaadato waxa aad ka shaqeysid ... jolin"Maxaa dhacaya haddii aysan ahayn kaftan!
Talo soo jeedin intee le'eg ayaa laga yaabi doonaa kharashkan? Aan ku biirno:
+ 3D 7,495D $ XNUMX
Tilmaamaha Hagaha $ 495
+ logo ee pitufo. $ 495
Wadarta: $ 17,775 laakiin adoo ah adeegsade gaar ah, in aanad burcad-badeedku kaa tagi doonin qiimaha macquulka ah ee ...
Post Previous«Previous Halkee laga helaa buug-gacmeedka Microstation
Post Next Google Earth ayaa taariikhda cusub ee taariikhda, taariikhda 2008Next »